Ukumboza - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax izosebenzisa i-Coating kumhlangano we-PCB ngazinye izicelo zamakhasimende.
Inqubo yokumboza imvamisa ibalulekile Ukuvikela amabhodi emswakeni nasekungcoleni (okungadala ukuvuza kukagesi). Le mikhiqizo ijwayelekile ekusetshenzisweni komswakama njengokugeza, amakhishi, izinhlelo zangaphandle… njll.
I-Fumax inabasebenzi abaqeqeshiwe nemishini yokumboza
Ukumboza yifilimu eqinile eqhubekayo etholwe uhlelo lokusebenza lwesikhathi esisodwa sokumboza. Ingqimba elincanyana lepulasitiki eligotshwe kwi-substrate enjengensimbi, indwangu, ipulasitiki, njll ukuze kuvikelwe, ukwahlukanisa, ukuhlobisa nezinye izinhloso. Ukumbozwa kungaba ngegesi, uketshezi, noma okuqinile. Imvamisa, uhlobo nesimo sokumbozwa kunqunywa ngokuya nge-substrate okufanele ifuthwe.
1. Izindlela ikakhulukazi:
2. I-Electroless Ni / AU
3. Ukucwiliswa Tin
4. I-OSP: Oragnic Solderability Preservative
2. Umsebenzi enamathela:
Vikela kumswakama nasekungcoleni (okungadala ukuvuza kukagesi);
Ukumelana nesifutho sikasawoti kanye nesikhunta;
I-anti-corrosion (njenge-alkali), ithuthukisa ukumelana nokonakala nokuxabana;
Thuthukisa ukumelana nokukhathala kwamajoyini we-solder angenawo umthofu;
Cindezela ukukhishwa kwe-arc ne-halo;
Nciphisa umthelela wokudlidliza kwemishini nokwethuka;
Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukukhulula ukucindezeleka ngenxa yokushintsha kwezinga lokushisa
3. Isicelo enamathela:
SMT & PCB inhlangano
Izixazululo Zokunamathela Kwephakeji Engaphezulu
Isixazululo se-PCB Coating
Isixazululo Sokuhlanganiswa Kwento
Imikhiqizo ephathekayo ye-elektroniki nezingxenye
Umhlangano we-LED nokusetshenziswa
Isixazululo seBhodi le-PCB Board
4. Inqubo izici:
Ngokuya ngenqubo yokumbozwa kwendawo ye-PCB, abakhiqizi be-PCB bahlala bebhekana nenselelo yokulinganisa okukhiphayo, izinto zokwakha, utshalomali lwabasebenzi nokuphepha. Ngasikhathi sinye, kufanele babheke izindaba zokulawula nezemvelo ezithintekayo kule nqubo. Izindlela zendabuko zokumboza ngaphezulu, njengokufaka idiphu nokufafaza izibhamu zomoya, imvamisa zidinga izinto eziphakeme (okokufaka nemfucuza) nezindleko zabasebenzi (inqwaba yabasebenzi nokuvikelwa kokuphepha kwabasebenzi). Izinto zokumboza ezingenawo amanzi kuphela zikhuphula izindleko.
5. Inzuzo yokumboza:
Ijubane eliphelele liyashesha.
Luhlala njalo futhi lunokwethenjelwa.
Ukunemba kokukhetha okuhle (incazelo yomphetho, ubukhulu, ukusebenza kahle) kungatholakala.
Isoftware isekela ukuguqula imodi yokufafaza esimweni sendiza, futhi ukusebenza kahle kokufafaza kusebenza kahle kokufafaza.